Fanorenana any Grande-Bretagne: Tahirin-tsary 2 (Septambra 2015 – Aogositra 2016)
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Toba) Catalan Cebuano Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Galicienne Grika Géorgien Haoussa Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Javaney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Poloney Portogey Rarotonga Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tiorka Tseky Télougou Valencienne Vietnamianina Xhosa Yorobà
Fanorenana any Grande-Bretagne: Tahirin-tsary 2 (Septambra 2015 ka Hatramin’ny Aogositra 2016)
Tany Mill Hill, any Londres, no nisy ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Grande-Bretagne. Afindra any akaikin’ny tanànan’i Chelmsford, any Essex, any amin’ny 70 kilaometatra any atsinanana anefa izy io izao. Ho hitantsika ato amin’ireto sary ireto ny fandroson’ilay asa nanomboka tamin’ny Septambra 2015 ka hatramin’ny Aogositra 2016.
29 Oktobra 2015: Trano hipetrahan’ny mpiasa sy fasiana fitaovana
Mpiasa mandraraka rihitra simenitra eo anoloan’ny garazy hikojakojana an’ireo milina hampiasaina amin’ny fanorenana.
9 Desambra 2015: Trano hipetrahan’ny mpiasa sy fasiana fitaovana
Mametaka tafo amin’ny trano iray hatao birao sy efitra fisakafoana mandritra ny fanorenana.
18 Janoary 2016: Trano hipetrahan’ny mpiasa sy fasiana fitaovana
Bilidaozera manala hazo eo amin’ny lalana fidirana. Tazonina amin’ny fitaovana manokana aloha ilay hazo vao tapahina. Ilay bilidaozera avy eo no manakisaka azy. Alohan’ny hahavitan’ilay fanorenana anefa, dia hambolena hazo be dia be eo amin’ilay toerana mba hanoloana an’ireo hazo nesorina.
31 Martsa 2016: Toerana hasiana an’ilay biraon’ny sampana
Manala an’izay fako mbola tavela, amin’izay mba madio tsara ilay tany rehefa ampiasaina.
14 Aprily 2016: Toerana hasiana an’ilay biraon’ny sampana
Mpiasa andeha hibata trano fiasana amin’ny rojo vy. Hatao birao sy trano fiasana izy ireo, ary samy hampiasa azy ireo daholo na izay tena mpiasa ao na izay mpiasa mandalo fotsiny.
5 Mey 2016: Toerana hasiana an’ilay biraon’ny sampana
Manangona an’izay zavatra mbola azo ahodina ary mametraka an’izany ao anaty daba. Nanapa-kevitra ny Komitin’ny Tetikasa Fanorenana hoe hafindra any an-toeran-kafa ny 95 isan-jaton’ny fako mbola azo ampiasaina. Be dia be anefa ireo fako, ka mbola tsy vita ny nanala azy rehetra. Nisy trano tsy maintsy noravana teo amin’ilay toerana. Tsy nariana anefa ny ankamaroan’ny biriky sy simenitra ary hazo tamin’ilay izy, fa nafindra toerana fotsiny mba hampiasaina amin’ny zavatra hafa.
23 Mey 2016: Trano hipetrahan’ny mpiasa sy fasiana fitaovana
Manototra tatatra eo amin’ilay toerana hasiana an’ireo trano vonjimaika hipetrahan’ny mpanao fanorenana.
26 Mey 2016: Toerana hasiana an’ilay biraon’ny sampana
Mandinika nofon-tany, ary mijery hoe azo anamboarana lalana ve ilay izy sa tsia.
31 Mey 2016: Planin’ilay biraon’ny sampana
Io no planin’ilay biraon’ny sampana. Neken’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah ilay izy, tamin’ny 31 Mey 2016. Efa neken’ny manam-pahefana teo an-toerana koa izy io. Azo atomboka amin’izay àry ilay tetikasa.
16 Jona 2016: Toerana hasiana an’ilay biraon’ny sampana
Ranon-tany avy eo amin’ilay toerana. Esorina ny fakofako mba ho azo ampiasaina indray ilay izy. Tsy ariana na soloana ilay ranon-tany, amin’izay mihena kokoa ny vola lany.
20 Jona 2016: Toerana hasiana an’ilay biraon’ny sampana
Diovina ilay toerana hasiana ny arabe fidirana. Avy be ny orana nandritra ny iray volana ka feno fotaka be ilay toerana. Nitohy foana anefa ilay asa.
18 Jolay 2016: Trano hipetrahan’ny mpiasa sy fasiana fitaovana
Tondrahana rano ny lalana mba tsy hamovoka. Atao foana mantsy izay hampahadio an’ilay toerana satria izany no fepetra takin’ilay fikambanana hoe Mpanao Fanorenana Miaro ny Tontolo Iainana. Tsy maintsy niditra ho mpikambana tao amin’izy io ny Komitin’ny Tetikasa Fanorenana, araka ny lalàna eo an-toerana. Ny Baiboly rahateo mampirisika hoe mila madio sy manaja ny hafa isika.
Manapaka vy hanantonana fantsona ilaina amin’ny fitaovana fampangatsiahan-drivotra.
22 Jolay 2016: Toerana hasiana an’ilay biraon’ny sampana
Manasaraka tany sy vatokely ary zavatra hafa mahatratra 20 000 metatra toratelo. Fitaovana fanasivanana maromaro no ampiasaina, ka miraraka ao ambany ny tany, fa izay zavatra ngezangeza kosa mijanona eo ambonin’ilay sivana. Afindra ilay tany avy eo, araka ny hitantsika eo amin’ny sary. Milina telo no mitatitra azy mankeny amin’ireo kamiao, aorian’izay.
Esorina izay tany misavovona mba hahitsy tsara hoatran’ny ao anaty planina ilay toerana.
18 Aogositra 2016: Toerana hasiana an’ilay biraon’ny sampana
Mbola atao mahitsihitsy tsara ilay toerana, araka ny hitantsika erỳ ankavia, amin’izay azo atomboka ny fototr’ilay trano. Efa vita ireo trano hipetrahan’ny mpiasa sy fasiana fitaovana, araka ny tazantsika erỳ aoriandriana kokoa. Mahazaka mpiasa 118 izy io.
Toerana tena miavaka ny Betela. Inona ny tanjon’ireo Vavolombelona miasa an-tsitrapo any? Fantaro ato izany.